Hab casriyeeysan ee haddiyadaha ciidda Krismaska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hab casriyeeysan ee haddiyadaha ciidda Krismaska
La daabacay måndag 15 december 2014 kl 16.04
Dhallaan badan oo aan helin haddiyad
U naxariisashada masaakiinta iyo sadaqo-siinta dadyoowga tabaaleey-san oo inta badabn gaadha heerka ugu sarreeya bisha diseembar oo ku beegan ciidda krismaska ayay sannadka ku cusub tahay hab cusub oo hadiyado baakadeey-san lagu siineyo haddiyadaha krismaska, dadyoowga aaney haddii kale u suurtagasheen iney haddiyad helaan.
Tusaale ahaan qorshaha "Skokartongsappellen" ayaa haddiyadaha ciidda krismaska u ururinaya dhammaan dadyoowga da'aha kala duwan, halka uu qorshaha lagu magacaabo "Farsta-klappen" uu goolkiisu yahay in dhammaan dhallaanka ku dhaqan waqooyiga magaalada Stockholm oo aaney suurtagal aaney ku seexan habeenka ciidda krismaska haddiyad la'aan:
- Dhammaan kuwan casaanka ku sumadeey-san ma aaney helin haddiyadda krismaska - gadaal ayaa laga yaabaa in haddiyad loola yimaado - waxaan qaadaneynaa dhallaanka xoogey korey ee da'doodu u dhexeeyso 8 illaa iyo 11 jir, aan aragno sida ey ku dhamaato
Goobta haddaiyadaha lagu qaabileyo ee faras-magaalaha Farsta ayuu daah ku yaal. Halkaa ayaa lagu dalbi karaa da'da ilmaha, jinsigooda ama ilmo gaar ah oo la dooneyo in haddiyad loo hibeeyo. - waxa lagu magacaabo haddiyadda Farsta - Farstaklapp. Mid ka mid ah dadyoowgii lahaa fikirka qorshahan oo si wada-jir ah loogala shaqeeyneyo ururka Giving people , Helene Andersson, kana mid ah howl-wadeennada laanta suuq-geeynta eexarunta faras-magaalaha Farsta, ayaa akhrinaysa magacyada dhallaanka:
- Alvin, Liam, Liam, dabadeed magac-gabdheed, magac wiil, magac gabdheed - caruurta aan dooneyn sababo kala duwan uga gaabsaday in magacyadooda halkan lahga sheego, qaarkood laga yaabee iney ku sugan yihiin hooyooyinka iyo dhallaanka raggooda laga qarineyo si aaney u wax-yeeleyn iyo wixii la mid ah. Markaa howl-wadeennada goobahaa ayaa haddiyadaha u soo dooneya. Haddii kale farriinta sms ayaa loo direyaa hooyada iyadu codsatay in haddiyad loo helo dhallaankeeda.
Bisha diseembar ayey kor u kacaan falalka sadaqa-bixinta ee bulsho-weynta iswiidhishku. In dhaqaale loogu deeqo ururrada madaxa-bannaan iyo taageera dadyoowga tabaaleey-san waa falal la dhaqameeystey. Qaar badan oo ka mid ah dhaqaalaha loogu deeqo ururradaa 16,9 bilyan oo koron ayaa sannadkii tagay la bixiyey afartii toddobaad ee ka horeeyey ciidda krismaska. Waa toddobaadyada u dhexeeya caadada loo yaqaanno "advent", middaasina oo axad walba la shido shumac. Sannadihii ugu dambeeyey ayey qaar ka mid ah bulshada reer Iswiidhen deeq ahaan u bixiyeen dhaqaale gaarsii-san 5,8 bilyan oo koronka iswiidhishka ah, iyadoona afar-daloolow mid dhaqaalahaasi sida ay sheegeen ururrada sadaqada ururiyaa ey soo gaadhay lacagtaasi wax yar horteed intii aan la gaarin ciidda krismaska ama jul-ka afkan iswiidhishka lagu yiraahdo. Balse waxaa iminka ku soo biirtay oo moodo noqotay waxa lagu magacaabo julpaket - waa baakad ay ku jirto haddiyad loogu talo galey ciidda krismaska.
Faras-magaalaha Farsta ayay si habsami leh uga socdaan howlaha ururinta haddiyadaha. Astrid waxay ka mid tahay howl-wadeennada gacanta ka geeysanaeya goobta lagu qabaneyo:
- Waxaa na soo gaaray baakad wanaag-san - oo ey ku jiraan kursiga dhallaanka lagu qaado iyo boombalo madax-kuti. Waxaan rajeeyn in ilmaha loogu talo galey aanu dhageeysaneyn barnaamijkaa! Waa gabar saddex sano jir ah oo lagu magacaabo Saga cidda loogu talo galey…
Waxaa markiiba loo direy farriinta sms-ka Saga hooyadeed ama goobta ay dhaqan tahay oo lagu war-geliyey iney ka soo doontaan haddiyad loogu hayo faras-magaalaha Farsta.
"Dalka Iswiidhen ayey ku dhaqan yihiin dhallaan ku sugan xaalad dhaqaale darro, iyadoona ay middaasi uga sii daran tahay xilliga lagu jiro ciidda krismaska. Dhallaanka qaarkood ayaaney suurtagal u aheyn iney helaan haddiyadaha ciidda, waana mid saameeyn ku yeelata dhallaanka qaasatan kolka ey ka soo noqdaan fasaxa ciidda oo ey saaxiibbadood ka sheekeeystaan wixii haddiyado loo siiyey. Waa mid ku qoran shaashadda facebook ee Farstaklappens, farriintaasina oo gaartay dadyoow fara badan - waxaa ka mid ah Marita oo la timid labadeeda wiil André iyo Mateo, waxaanay hooyadaasi dooneysaa iney ilmaheedu arkaan sida wax u socdaan iyo iney qayb ka noqon karaan:
- Haddiyadan ciyaarta shaxda ayaannu soo iibiney.
- Waa mid haddiyad loo siin karo wiil iyo gabarba, waan mshay u wanaag-san. Waa shax ka kooban 100 qaybood, waxayna ku wanaag-san tahay dhallaanka da'doodu u dhexeeyso 6 illaa iyo 8 jir. Halka uu Mateo ku mashquul-san yahay waxa goobta ka dhacaya ayuu André caawinayaa odeyga tomte-ha:
- U ogolow inuu odeyga tomtuhu go'aamiyo, marka sida ayaa loo wadi dhigi karaa liiska magacyada
- Waxay u eg-tahay in mid ka mid ah la yiraahdo Teo, oo la sami ah saaxiibkaaga ugu wanaag-san - ma dooraneeysaa Teo?
- Halka mar riix.
Shaxda ku xigta waxaa cidda la siineyo go'aankeeda lahaa André oo taageero ka helayay odayga Tomtaha.
Baakadda ayaa dabadeed la dhigey qolka xiga, halkaasina oo ey yaalaan haddiyado kun gaareya, halka qaarkoodna horey loo siiyey dadkii lahaa. Ururka Giving people oo qiyaas ku sameeyay ilmaha ku sugan fakhriga ee ku dhaqan nawaaxiga koonfurta magaalada Istockholm. Waa tiro badan, waxaana loo baahan yahay hadiyado intaa ka badan. Xarunta ganacsiga farasmagaalaha Farsta ayaa sidoo kale haddiyadaha wax ka bixinaysa:
- Baakadaha haddiyadaha ee aan cidi qaadan ayuu ururka Giving people u dirayaa ururrada mucaawinnada oo ey ka mid yihiin Stockholms stadsmission, Kvinnojouren, Fryshuset, kooxda hooyooyinka kelida ah iyo sidoo kale Frälsningsarmén, sida ay sheegtay Helene, ahna gabadhii fikirkan lahayd. Howshahanina oo socon doona illaa iyo 14-ka bisha diseembar. Waa haddiyado un ah alaabo cusub, macnana sameeyn meeyso halkii laga soo iibiyey - faras-magaalaha Farsta ama meel kale:
- Ilmahan waxay dhaxleen wlaxo, haddii ey heleen haddiyad. Marka waa iney noqotaa haddiyad cusub.
- Da'aha ma la kala dooran karaa?
- Haa, dhab ahaan Absolut!
- Dib ayaan isugu soo noqon doonnaa!